MacBook na-esote nwere ike ibu ihuenyo OLED Esi m mac
MacBook na-esote nwere ike ibu ihuenyo OLED
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | MacBook, Asịrị, ọtụtụ
N’ụbọchị ndị a, anyị ahụla ọtụtụ arụmụka ndị pụtara mgbe isi okwu ikpeazụ “Ndewo Ọzọ” na mmekọrita nke Apple nwere ike iju anyị anya ma ọ bụ gbalịa inweta ihe dị nnọọ ọhụrụ ahịa. Dị ka ọ dị na nkwupụta ndị gara aga, enwere ndị ọrụ na-eche na ihe ewepụtara dị ka Apple na usoro ọhụụ, mana ndị ọrụ ndị ọzọ na-ekwu na ọ dị ha ka nwute.
Ka ụbọchị na-aga, o yiri ka Apple amalitela ụzọ ọ ga-eji ngwa ọrụ ọhụụ gaa, mana ụzọ a juputara na ọkwa. Nzọụkwụ mbụ ga-abụ ngosipụta nke ọhụrụ Macbook Pro mbubreyo 2016, mana dịka asịrị na ozi ọma na nkọwapụta zuru oke, ihe niile dị ka nke a bụ mbido.
Apple kpebiri iji otu egwu ọkọlọtọ ya, Macbook Pro. Nchekwa n'ihi na ọ bụ otu n'ime ndị otu ogologo ndụ na ọkọlọtọ maka Apple.
Dika akuko nke ETNews dere, Macbook na-esote ga-etinye ihuenyo OLED. Ọ na-eme ụfọdụ uche na Apple na-ịkụ nzọ na ihe a. N’ezie, betting na-ama ịkụ nzọ ka anyị cheta ya A na-eji Ogwe Aka nke MacBook Pro ọhụrụ mee ihe a. Ya mere, ị nwere ahụmịhe na ya. Anyị na-eche ee enwebeghị ihe a na akụrụngwa ọhụrụ dị ka ọ ghara ime ka akụrụngwa ahụ dị oke ọnụ.
Nsonye nke ihe a na Macbooks ndị dabara adaba n'ụzọ zuru oke maka ebumnuche dị iche iche anyị na-ekpughe n'okpuru:
Nke mbụ, Apple lekwasịrị anya na ịme kọmpụta ọkụ, obere na ergonomic. Ngwakọta a na-enye ohere iji belata akụkụ nke akụrụngwa na ịdị arọ ya.
Nke abuo, na-arụ ọrụ nke ọma karị na oriri ike. Ya mere, ọ ga - abụ ihuenyo kachasị mma maka obere ezinụlọ karịa na akụkụ.
Akụkụ na-adịghị mma nke ihe a na n'ezie Otu n'ime ihe kpatara Apple maka ịghara itinye ya bụ ụgwọ nrụpụta yana enweghị ike ịgbachapụ agbacha nke agba agba ọsọ ọsọ. N'ezie Apple na-arụ ọrụ na nkwenye ndị a iji nye ngwaahịa dị ịtụnanya, mana yana ogo na imewe anyị maara.
Anyị ga-ama, ịnwe ihuenyo OLED na ọdịnihu Macbook Pro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Asịrị » MacBook na-esote nwere ike ibu ihuenyo OLED
Esi lelee faịlụ GIF na Mac